အမေရိက၏အကောင်းဆုံးမနက်လည်စာစားသောက်ဆိုင် ၁၀၀ - ၂၀၂၁ စာရင်းထုတ်ပြန်နိုင်သည်
ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများ ဝဘ်ဆိုက်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်မလဲ။ Wordpress ကိုကျွမ်းကျင်ရန်သင်ယူပါ သင်၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ၀ န်ဆောင်မှု
FR : https://www.hebergementwebs.com/life/les-100-meilleurs-restaurants-de-brunch-en-amerique-opentable-publie-sa-liste-2021
EN : https://www.hebergementwebs.com/life/america-s-100-best-brunch-restaurants-opentable-releases-2021-list
ES : https://www.hebergementwebs.com/la-vida/los-100-mejores-restaurantes-de-brunch-de-estados-unidos-lista-de-lanzamientos-de-opentable-2021
BE : https://www.hebergementwebs.com/жыццё/100-лепшы-рэстаран-сняданак-у-Амерыцы-адкрыты-стол-публікуе-свой-спіс-2021
GL : https://www.hebergementwebs.com/vida/os-100-mellores-restaurantes-brunch-en-america-opentable-publica-a-sua-lista-2021
BS : https://www.hebergementwebs.com/život/100-najboljih-restorana-za-dorucak-u-americi-opentable-objavljuje-svoju-listu-2021
AM : https://www.hebergementwebs.com/ሕይወት/የ-100-ምርጥ-ብሩክ-ምግብ-ቤቶች-በአሜሪካ-ተመራጭ-የእሱ-ዝርዝር-እ.ኤ.አ.-2021
FY : https://www.hebergementwebs.com/libben/de-100-beste-brunch-restaurants-yn-amearika-opentable-publisearje-syn-list-2021
AR : https://www.hebergementwebs.com/الحياة/أفضل-100-مطعم-برانش-في-أمريكا-مفتوح-ينشر-قائمته-2021
HR : https://www.hebergementwebs.com/život/100-najboljih-ruckova-restorana-u-americi-opentable-objavljuje-svoj-popis-2021
HE : https://www.hebergementwebs.com/חַיִים/100-המסעדות-הטובות-ביותר-של-בראנץ-באמריקה,-נפתחות-ומפרסמות-את-הרשימה-שלה-2021
BN : https://www.hebergementwebs.com/জীবন/আমেরিকা-এ-ওপেনটেবল-প্রকাশিত-এর-তালিকা-2121-এর-100-সেরা-ব্রাঞ্চ-রেস্তোঁরাগুলি
HA : https://www.hebergementwebs.com/rayuwa/-100-mafi-kyau-brunch-gidajen-cin-abinci-a-amurka-opentable-wallafa-jerin-sa-2021
CA : https://www.hebergementwebs.com/la-vida/els-100-millors-restaurants-brunch-a-america-opentable-publica-la-seva-llista-2021
GA : https://www.hebergementwebs.com/saol/foilsionn-an-100-is-fearr-brunch-bialanna-in-america-opentable-publ-its-list-2021
HT : https://www.hebergementwebs.com/lavi/100-pi-bon-kolasyon-restoran-nan-amerik-opentable-pibliye-lis-li-yo-2021
DE : https://www.hebergementwebs.com/leben/die-100-besten-brunch-restaurants-in-amerika-opentable-veroffentlichen-ihre-liste-2021
EO : https://www.hebergementwebs.com/vivo/la-100-plej-bonaj-bruncaj-restoracioj-en-amerikaj-lerteblaj-publikigas-gian-liston-2021
ID : https://www.hebergementwebs.com/kehidupan/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
HU : https://www.hebergementwebs.com/élet/a-100-legjobb-villasreggeli-ettermek-amerikaban-megnyithato-kozzeteszi-a-2021-es-listajat
AF : https://www.hebergementwebs.com/lewe/die-100-beste-brunch-restaurante-in-amerika-openbaar-publiseer-sy-lys-2021
CS : https://www.hebergementwebs.com/život/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
GD : https://www.hebergementwebs.com/beatha/an-100-best-brunch-taighean-bidh-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
ET : https://www.hebergementwebs.com/elu/the-100-parim-brunch-restoranid-ameerikas-opentable-avaldab-oma-nimekirja-2021
FI : https://www.hebergementwebs.com/elämää/100-parasta-brunssiravintolaa-amerikassa-opentable-julkaisee-listansa-2021
CO : https://www.hebergementwebs.com/vita/i-100-migliori-ristoranti-brunch-in-america-opentable-publica-a-lista-2021
EU : https://www.hebergementwebs.com/bizitza/amerikako-100-jatetxe-jatetxe-onenak-opentable-argitaratzen-du-bere-zerrenda-2021
FA : https://www.hebergementwebs.com/زندگی/100-بهترین-بهترین-رستوران-های-در-آمریکا-opentable-لیست-خود-2021-را-منتشر-می-کند
CY : https://www.hebergementwebs.com/bywyd/y-100-gorau-brunch-bwytai-yn-america-opentable-publishes-its-list-2021
GU : https://www.hebergementwebs.com/જીવન/-100-બેસ્ટ-બ્રંચ-રેસ્ટ-restaurantsરન્ટ્સ-ઇન-અમેરિકા-entપ્ટેબલ-પ્રકાશિત-તેની-સૂચિ-2021
BG : https://www.hebergementwebs.com/живот/100-най-добрите-ресторанти-за-брънч-в-Америка-отворена-маса-публикува-списъка-си-2021
DA : https://www.hebergementwebs.com/liv/de-100-bedste-brunch-restauranter-i-amerika-abenbar-udgiver-sin-liste-2021
EL : https://www.hebergementwebs.com/ΖΩΗ/το-100-καλύτερα-brunch-εστιατόρια-στην-Αμερική-ανοίγει-δημοσιεύει-του-λίστα-2021
AZ : https://www.hebergementwebs.com/həyat/amerikadaki-ən-yaxsi-100-dən-cox-brunch-restoran-siyahisini-2021-ni-dərc-edir
NL : https://www.hebergementwebs.com/leven/de-100-beste-brunchrestaurants-in-amerika-opentable-publiceert-zijn-lijst-2021
PL : https://www.hebergementwebs.com/życie/100-najlepszych-brunchowych-restauracji-otwieranych-w-ameryce-publikuje-liste-2021
LT : https://www.hebergementwebs.com/gyvenimo/„100-geriausiu-priespieciu-restoranu-amerikoje-opentable“-skelbia-savo-sarasa-2021
NY : https://www.hebergementwebs.com/moyo/malo-odyera-100-abwino-brunch-ku-america-opentable-amafalitsa-mndandanda-wake-2021
MT : https://www.hebergementwebs.com/ħajja/il-100-aqwa-ristoranti-brunch-fl-amerika-opentable-tippubblika-il-lista-taghha-2021
IG : https://www.hebergementwebs.com/ndụ/the-100-best-brunch-restaurants-na-america-opentable-ebipụta-ya-ndepụta-2021
NO : https://www.hebergementwebs.com/liv/de-100-beste-brunsjrestaurantene-i-amerika-apner-publiserer-sin-liste-2021
OR : https://www.hebergementwebs.com/ଜୀବନ/-100-ସର୍ବୋତ୍ତମ-ବ୍ରଞ୍ଚ-ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଆମେରିକାରେ-ଅପ୍ଟେଣ୍ଟେବଲ୍-ପ୍ରକାଶ-ଏହାର-ତାଲିକା-2021-|
LV : https://www.hebergementwebs.com/dzīve/100-labakie-pusdienu-restorani-amerika-opentable-publice-savu-sarakstu-2021
KA : https://www.hebergementwebs.com/სიცოცხლე/100-საუკეთესო-ბრენჩ-რესტორანი-ამერიკაში-opentable-აქვეყნებს-მის-სიას-2021
PS : https://www.hebergementwebs.com/ژوند/د-100-غوره-برنچ-رستورانتونه-په-امریکا-کې-د-انتخاب-وړ-خپرونه-د-دې-لیست-2021
IS : https://www.hebergementwebs.com/lífið/100-bestu-brunch-veitingastaðirnir-i-ameriku-opentable-birtir-listann-2021
RW : https://www.hebergementwebs.com/ubuzima/-100-nziza-ya-brunch-resitora-muri-amerika-opentable-itangaza-urutonde-2021
KO : https://www.hebergementwebs.com/생명/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
SI : https://www.hebergementwebs.com/ජීවිතය/100-හොඳම-බ්‍රන්ච්-අවන්හල්-ඇමරිකා-විවෘත-ප්‍රකාශනය-එහි-ලැයිස්තුව-2021
SD : https://www.hebergementwebs.com/زندگي/-100-بهترين-برنچ-ريسٽورنٽ-آمريڪا-کليل-پبلش-انجي-فهرست-2021
RU : https://www.hebergementwebs.com/жизнь/100-лучших-ресторанов-Америки,-готовых-к-бранчу,-публикует-свой-список-в-2021-году.
PT : https://www.hebergementwebs.com/vida/os-100-melhores-restaurantes-brunch-da-america-opentable-publica-sua-lista-2021
IT : https://www.hebergementwebs.com/vita/i-100-migliori-ristoranti-per-brunch-in-america-opentable-pubblica-la-lista-2021
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಜೀವನ/100-ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಬ್ರಂಚ್-ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು-ಅಮೆರಿಕಾ-ಓಪೆಂಟಬಲ್-ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ-ಅದರ-ಪಟ್ಟಿ-2021
MS : https://www.hebergementwebs.com/kehidupan/the-100-best-brunch-restoran-di-amerika-boleh-dibuka-menerbitkan-itu-senarai-2021
ML : https://www.hebergementwebs.com/ജീവിതം/100-മികച്ച-ബ്രഞ്ച്-റെസ്റ്റോറന്റുകൾ-അമേരിക്ക-ഓപന്റബിൾ-പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു-അതിന്റെ-ലിസ്റ്റ്-2021
RO : https://www.hebergementwebs.com/viaţă/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publica-lista-sa-2021
MR : https://www.hebergementwebs.com/जीवन/-100-बेस्ट-ब्रंच-रेस्टॉरंट्स-इन-अमेरिका-ओपेंटेबल-पब्लिकेशन्स-इट-लिस्ट-2021
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਜ਼ਿੰਦਗੀ/-100-ਸਰਬੋਤਮ-ਬ੍ਰੰਚ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਇਨ-ਅਮੇਰਿਕਾ-ਓਪੈਂਟੇਬਲ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਇਸ-ਦੀ-ਸੂਚੀ-2021
JA : https://www.hebergementwebs.com/生活/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
KY : https://www.hebergementwebs.com/жашоо/Американын-эң-мыкты-100-ресторан-ашканалары-анын-тизмесин-2021-жарыялады
MN : https://www.hebergementwebs.com/амьдрал/Америк-дахь-хамгийн-сайн-зууш-ресторанууд-2021-ийн-жагсаалтыг-гаргалаа
KK : https://www.hebergementwebs.com/өмір/2021-американдық-ең-жақсы-таңғы-ас-мейрамханалар-оның-тізімін-2021-шығарады
TR : https://www.hebergementwebs.com/hayat/the-100-best-brunch-restoranlar-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
VI : https://www.hebergementwebs.com/đời-sống/the-100-best-brunch-restaurant-in-america-opentable-publishers-its-list-2021
TH : https://www.hebergementwebs.com/ชีวิต/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-published-its-list-2021
SQ : https://www.hebergementwebs.com/jeta/100-restorantet-paradreke-me-te-mire-ne-amerike-opentable-boton-listen-e-saj-2021
YO : https://www.hebergementwebs.com/igbesi-aye/awọn-100-ti-o-dara-julọ-brunch-awọn-ounjẹ-ni-america-opentable-ṣe-atẹjade-akojọ-rẹ-2021
UR : https://www.hebergementwebs.com/زندگی/100-بہترین-برنچ-ریستوراں-میں-امریکہ-قابل-انتخاب-اشاعت-اس-کی-2021
TA : https://www.hebergementwebs.com/வாழ்க்கை/100-சிறந்த-புருன்சிற்கான-உணவகங்கள்-அமெரிக்காவில்-திறக்கக்கூடிய-வெளியிடுகிறது-அதன்-பட்டியல்-2021
SV : https://www.hebergementwebs.com/liv/de-100-basta-brunch-restaurangerna-i-amerika-opentable-publicerar-sin-lista-2021
ZU : https://www.hebergementwebs.com/impilo/izindawo-zokudlela-ezingama-100-best-brunch-in-america-ezingasetshenziswa-zishicilela-uhlu-lwazo-2021
SL : https://www.hebergementwebs.com/življenje/the-100-best-brunch-restaurant-in-america-opentable-publishes-its-list-2021
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/生活/在美國開放的100家最佳早午餐餐廳中發布其列表2021年
ST : https://www.hebergementwebs.com/bophelo/lireschorente-tsa-100-tse-ntle-ka-ho-fetisisa-tsa-brunch-in-america-tse-fumanehang-li-phatlalatsa-lethathamo-2021
SW : https://www.hebergementwebs.com/maisha/migahawa-100-bora-ya-brunch-huko-amerika-inayoweza-kuchapishwa-orodha-yake-2021
UG : https://www.hebergementwebs.com/ھايات/ئامرىكادىكى-100-ئەڭ-ياخشى-كاۋاپدان-رېستورانلار-تىزىملىك-2021
SO : https://www.hebergementwebs.com/nolosha/100-ka-ugu-fiican-makhaayado-in-america-opentable-daabacaa-liiskeeda-2021
TE : https://www.hebergementwebs.com/జీవితం/100-ఉత్తమ-బ్రంచ్-రెస్టారెంట్లు-ఇన్-అమెరికా-ఓపెన్-ప్రచురిస్తుంది-దాని-జాబితా-2021
SK : https://www.hebergementwebs.com/život/the-100-best-brunch-restaurants-in-america-opentable-publes-its-list-2021
XH : https://www.hebergementwebs.com/ubomi/i-100-eyona-ibrunch-yokutyela-e-america-enokuzenzela-ipapasha-uluhlu-lwayo-2021
SN : https://www.hebergementwebs.com/hupenyu/iyo-100-yakanyanya-brunch-maresitorendi-mu-america-inogoneka-inodhinda-yayo-runyorwa-2021
UK : https://www.hebergementwebs.com/життя/100-кращих-ресторанів-бранчів-в-Америці-відкритий-стіл-публікує-свій-список-2021
TT : https://www.hebergementwebs.com/тормыш/100-иң-яхшы-иртәнге-рестораннар-америка-опенталь-нәшер-итә-аның-исемлеге-2021
UZ : https://www.hebergementwebs.com/hayot/amerika-dagi-eng-yaxshi-100-ta-brunch-restoran-2021-ro-yxatini-nashr-etadi-2021
TG : https://www.hebergementwebs.com/зиндагӣ/100-тарабхонаи-беҳтарин-тарабхонаҳо-дар-Амрико-кушода-рӯйхати-онро-2021-нашр-мекунад
OpenTableစစ်တမ်းတစ်ခုအရအမေရိကန်လူဦးရေ၏၃၃%သည်၎င်းတို့၏မိသားစုကိုတစ်နှစ်ကျော်အစည်းအဝေးများတွင်မတွေ့ရပါ။ထို့အပြင်၎င်း၏အချက်အလက်များအရယနေ့စာအုပ်များသည်၆၄%ပိုမိုများပြားလာကြောင်းဖော်ပြသည်။“ဒီအမေနေ့ဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ကတည်းကမိသားစုများပြန်လည်ဆုံစည်းကြပြီပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်"ဟု OpenTable ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Debby Soo ကကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည် ဒီပွဲတော်ကိုသူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်စားသောက်ဆိုင်တွေကအကောင်းဆုံးမနက်လည်စာစားသောက်ဆိုင်တွေသေချာအောင်လုပ်ချင်ကြတယ်။
Chicago's Cabra Cevicheria ဟာ Hoxton Hotel ပေါ်ကနေတည်ရှိပြီးပီရူးမှလှုံ့ဆော်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ... ဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။
ပြည်နယ် ၂၄ ခုနဲ့ကိုလံဘီယာခရိုင်ရှိစားသောက်ဆိုင်များပါဝင်တဲ့စာရင်းအပြည့်အစုံကိုအတည်ပြုပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ၁၂ သန်းမှစားသောက်ဆိုင် ၃၀,၀၀၀ မှာ ပြည်နယ် ၅၀ နှင့် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ
ကယ်လီဖိုးနီးယားသည်အနိုင်ရရှိသူ ၁၇ ဦး ဖြင့်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ ဖလော်ရီဒါနှင့် Pennsylvania သည်ဒုတိယနေရာတွင်ထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင်ရှစ်ခုပါရှိသည်။ept အနိုင်ရစားသောက်ဆိုင်များ, ဂျော်ဂျီယာ၊ မင်နီဆိုတာနှင့်နီဗားဒါးတို့သည်အနိုင်ရရှိသူ ၆ ဦး ဖြစ်သည်။
စာရင်းအပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်အောက်သို့ scroll or - သို့မဟုတ်။
၂၀၂၁ အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကောင်းဆုံးနေ့လည်စာစားပွဲ ၁၀၀ ။
Hermosa Inn ရှိ
Arizona Tariff ။ "
Arizona Tariff '။ Arizona ပြည်နယ်၊ Hermosa အင်း၊
A'Bouzy (Houston, TX)
Ambar Capitol Hill (Washington DC)
Anis Cafe နှင့် Bistro (Atlanta, GA)
Atchafalaya စားသောက်ဆိုင် (New Orleans, LA)
The Aviary စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား (Swansea, MA)
Baldamar (Roseville, MN)
The Rocky Fork Creek Barn (Gahanna, OH)
သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေကဖေး၊ Crystal Cove (Newport Coast) , CA)
Beetlecat (Atlanta, GA)
Edgewood Tahoe at Bistro (Stateline, NV)
LaBelle Winery Amherst (Amherst, မှာရှိတဲ့ Bistro)NH)
Bistro L'Hermitage (Woodbridge, Virginia)
Bistro Niko (Atlanta, GA) Black Bass ဟိုတယ် (Lumberville, PA) Blue Bell Inn (Blue Bell, PA)
The Boathouse (Buena Vista Lake, FL)
Bristol ပင်လယ်စာကင်ဆာ (Leawood, KS) Brix (Napa, CA)
Buttermilk & Bourbon (Boston, MA) Cabra (Chicago, IL)
Cafe Ba-Ba-Reeba ( ချီကာဂို, IL)
Cafe Monte (Charlotte, NC)
Canoe (Atlanta, GA)
Cap City Fine Diner & Bar, Grandview (Columbus, OH)
Cappy's စားသောက်ဆိုင် (San Antonio, Texas)
Carson ရဲ့အစားအစာနှင့်သောက်စရာ (Lexington, KY)
Cheever's Cafe (Oklahoma City, OK)
Ch ianti Grill (Burnsville, MN)
Dandelion (Philadelphia, PA)
Del Vino စပျစ်ဥယျာဉ်များ (Northport, NY)
Duke's La Jolla (San Diego, California)
Eiffel Tower (Las Vegas, NV)
Eight4Nine (Palm Springs, CA)
Fabian ရဲ့ Italian Bistro (Fair Oaks, CA)
ရော်ဂျာဥယျာဉ်ရှိလယ်ယာမြေ (Corona Del Mar, CA)
ပျံသန်းစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဝိုင်ဘား (Memphis, TN)
အစားအစာစျေးကွက် (Baltimore, MD)
နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ရုံ (ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ CA)
The Front Yard (North Hollywood, CA)
Bonjour Cafe (Golden Valley, MN)
Grace's (Houston, TX)
Great Maple (San Diego, California)
Green Valley Grill (Greensboro, NC)
The Hampton Social (နေရာများစွာ)
Happy Camper (Denver, CO)
Haywire (Plano, TX)
Hazelwood (Bloomington, MN)
ကဲသာဘုရင်နန်းတော် (Las Vegas, NV) ငရဲမီးဖိုချောင်
The Henry (Phoenix, AZ)
ပျားရည်ဆား (Las Vegas, NV)
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားရှိ JOLO Winery နှင့် Vineyards တွင်စားသောက်ရန်နည်းလမ်းများအားလုံးရှိပါသည်။
မိုးလုံလေလုံထမင်းစားခန်း၊ ပြင်ပလှေကားထစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ တံခါးပိတ်အပြင်ဘက်တွင်ကျန်ကြွင်းသောနေရာ၊ တဲတစ်လုံး၌ပုဂ္ဂလိကကြည့်စင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပျော်ပွဲစားစားပွဲများ
JOLO Winery & Vineyards (ရှေ့ပြေးတောင်၊ မြောက်ကာရိုလိုင်းနား)
La Merise (Denver, CO)
ရေကန် Elmo Inn (Elmo Lake, MN)
နေဝင်ချိန်သော့ချက် (Key West, FL)
ဒီသံတမန် (၀ ါရှင်တန်ဒီစီ)
The Yaca (Williamsburg, VA))
Ledger စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား (Salem, MA)
Lindey's (Columbus, OH)
Little ဆိတ် (ချီကာဂို, IL)
လွန်းရဲ့ Hermosa မှာ (Paradise Valley, Arizona)
The Love (Philadelphia, PA) Madison (San Diego, CA) Meson Sabika (Naperville, IL) > Paris Hotel (Las Vegas, NV) ရှိမွန်အာဘီဂါဘီ Murphy's (Atlanta, GA) OBC မီးဖိုချောင် (Lexington, KY) Old Ebbitt Grill (Washington DC) )
Ouisie ၏စားပွဲ (Houston, TX)
ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းကင် (ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရှိကာဒစ်ဖ်)
ပန်းခြံ (Philadelphia, PA)
Perch (Los Angeles, CA)
Pier W (Cleveland, OH)
ညံ့ဖျင်းသော Calvin's (Atlanta, GA)
ချုပ် - အမေရိကန်မီးဖိုချောင်နှင့်ဘား (Huntington, NY)
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း Bistro (Greensboro, NC)
JG မှဖွင့်ထားသောခေါင်မိုး (Beverly Hills, CA)
ရွန်နီရဲ့ Oceanfront စားသောက်ဆိုင် (Long Branch, NJ) Root Down (Denver, CO) Seed Kitchen + Bar (Marietta, GA) Sheldon Inn စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား (Elk Grove, CA) Simon Pearce စားသောက်ဆိုင် (Quechee, VT) Soby's (Greenville, SC) Summer House Santa Monica (ချီကာဂို၊ IL)
Omni Grove Park Inn (Asheville, NC) မှနေဝင်ချိန် Terrace
Talula's Garden (Philadelphia, PA)
Dubsdread ရှိ Tap Room (Orlando, FL) Tavern4&5(enဒင်ဥယျာဉ်၊ MN) Terrain Cafe (Glen Mills, PA) The Tropical (Palm) Springs, CA) Ulele (Tampa, FL) Union and Finch (Allentown, PA) Vintage (Vail, CO) WeHo Bistro (West Hollywood, CA) ဝီစကီကိတ်မုန့် (Plano, TX) ဝိုင်ဘားဂျော့ခ်ျ၊ A Restaurant & Bar (Orlando, FL) Yardbird တောင်ပိုင်းစားပွဲနှင့်ဘား (နေရာများစွာ) Zaytinya (Washington DC)
ဒိန်းမတ်အမွေအနှစ်လက်ဝတ်ရတနာအိမ် Griegst သည်ကိုပင်ဟေဂင်ရှိဖက်ရှင်ဆိုင်၊
2021-06-12 17:30:04 | ဘဝ
Linkedin တွင်ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်မျှဝေပါ။ ဒိန်းမတ်ပန်းချီကားနှင့်ပန်းပုဆရာ Arje Giregst မှဖန်တီးထားသောရတနာများသည်အနုပညာရှင်အား ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောလှပသောလိမ်လည်လှည့်ဖျားများ၊ အခွံများနှင့် stalactites House of Griegst နှင့်အတူသဘာဝဖြစ်ရပ်များ၊ အလွန်ဒိန်းမတ်အနုပညာရှင် Arje Griegst ၏ရူပါရုံနှင့်နည်းပ...
Montegrappa blackstar david bowie အမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်
2021-06-12 16:43:26 | ဘဝ
Facebook တွင်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin Montegrapp တွင်မျှဝေပါ David Bowie Blackstar လီမိတက် Edition ။ Montegrappa အံ့သြစရာကောင်းတာက David Bowie ဟာအောက်မေ့ဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ "Under Pressure" အတွက်ဘုရင်မနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနှစ်ပေါင်း ၄၀ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်လုံးသည်အောင်မြင်ပြီး Bowie ၏တတိယမြေ...
ဖခင်များနေ့ဖခင်လက်ဆောင်လမ်းညွှန်: ‌ coolest‌ tech‌ iftgifts‌ ‌for‌ ‌ $ 500‌ ဒေါ်လာနှင့်ဒီထက်နည်း
2021-06-08 04:37:02 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်သင်၏အဖေကိုနည်းပညာဆိုင်ရာ ဦး စားပေးလက်ဆောင်ဘောက်ချာကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ မင်းအတွက်ကံကောင်းတာကမင်းကိုသူမအကြိုက်ဆုံးကလေးဖြစ်လာနိုင်မယ့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုငါစုစည်းထားတယ်။ ဂေါက်သီးအိတ်ကကလပ်တွေကိုင်ပြီးတေး...
Belmont လောင်းကြေး ၂၀၂၁: ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်သည့်အလေးသာမှုများ၊ ထိပ်ဆုံးလောင်းကစားများနှင့်မည်သည့်မြင်းသည်အကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိမည်နည်း
2021-06-07 02:18:03 | ဘဝ
Twitter ရှိ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ။ Linkedin LOUISVILLE, KENTUCKY - 27ပြီ ၂၇: Kentucky၊ ၂၀၂၁ Louisပြီ ၂၇ ရက်၊ Louisville, Churchill Downs တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်Churchပြီလ ၂၇ ရက်၊ Churchill Downs တွင်ဒါဘီတွင်ကူကီကိုလေ့ကျင့်နေစဉ်။ (Andy Lyons / Getty Images မှဓာတ်ပုံ။ ) Getty Images ဒေါ်လာ ၂. ၅ သန်းတန် Bel...
Belmont လောင်းကြေး 2021 ရလဒ် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အသွေးအနိုင်ရရှိမှု၊ Charlie hot hot rod, rombauer show
2021-06-06 17:59:44 | ဘဝ
Linkedin ELMONT, New York - June 05: လူးဝစ်ဆေ့စ်နှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အသွေးသည် ၁၅၀၃ ကြိမ်မြောက် Belmont Stakes ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ [+] Belmont Stakes သည် Hot Rod Charlie နှင့် Flavien Prat နှင့်အတူဇွန်လတွင်ဒုတိယအနေဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ နယူးယောက်, Elmont, 05, 2021 ။ (Sarah Stier /...
Belmont လောင်းကြေး ၂၀၂၁ - ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်သည့်အလေးသာမှုများ၊ ထိပ်တန်းလောင်းကစားများနှင့်မည်သည့်မြင်းသည်ပိုနှစ်သက်သောအရည်အသွေးကိုရရှိမည်နည်း
2021-06-05 12:05:55 | ဘဝ
Betamethasone မှထွက်ပေါ်လာခြင်းများ - ဒုတိယအကြိမ်အပြုသဘောဆောင်သောစမ်းသပ်မှု၊ Churchill Downs သည် Bob Baffert ကိုနှစ်နှစ်ပိတ်ပင်ထားပြီး Mandaloun တွင်လောင်းကစားများမအောင်နိုင်ပါ။
2021-06-04 03:37:01 | ဘဝ
Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ။ Linkedin တွင်အပြုံးများအားလုံးနေ့။ Medina Spirit မှနည်းပြ Bob Baffert သည်အနိုင်ရပြီးနောက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ Louisville က, ကီအတွက်မေလ 01, 2021 ။ (အန်ဒီလီယွန်လွန်း / Getty Images မှဓာတ်ပုံ) Getty Images ရနံ့သည် Otomax ဖြစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းရုန်းကန်နေသည့်နည်းပြ...
2021-06-03 17:56:50 | ဘဝ
Facebook တွင်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ရှာပါ MariposaDahl စားသောက်ဆိုင် GroupMariposa သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ဆီဒိုးနားပန်း ဦး ရစ်သရဖူတွင်ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည် (ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဆုရအစားအစာ၊ ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှု)၊ the "ဒဏ္experienceာရီအတွေ့အကြုံ"...
အဖေများနေ့လက်ဆောင်လမ်းညွှန် - အဖေအတွက်အကောင်းဆုံးယင်ကောင်ငါးဖမ်းကိရိယာ
2021-06-03 00:52:48 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါ။ မကြာသေးမီကစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းအားကစားတွင်စုရုံးရောက်ရှိလာသောလူများ၏လှိုင်းသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား။ သို့မဟုတ်သူသည်ကိုယ်ရံတော်ဟောင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်။ ဗဟုသုတ ရှိ၍ သူ၏လျှို့ဝှက်ငါးဖမ်းကွက်များက...
ဒီအနှစ်တစ်ထောင်က start-up, ပြင်ပပစ္စည်းကိရိယာများ၏ရှုခင်းကိုလှုပ်နေသည်။ ပေါင် ၆၀၀ အမွေရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသတိထားသင့်သည်
2021-06-02 02:41:35 | ဘဝ
လုံးဝရိုးသားဖို့၊ “ လျှပ်စစ်စက်ဘီး” (ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်စက်ဘီး) ၏အယူအဆတစ်ခုလုံးသည်အစတွင်ကျွန်ုပ်ကိုအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်လက်ချောင်းမချနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကလိမ်ညာမှု၏ပေါ့ပေါ့ရှူ; Lithium-ion စွမ်းအင်သုံး Deflategate ဘီးများပေါ်တွင်ကျွန်တော်ဟာစ...
2021-06-02 00:28:43 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်မျှဝေပါ။ ကမ်းခြေရှိနေရောင်ခြည်ကိုနေရောင်ကာလိမ်းဆေးအသုံးပြုသောမိန်းမငယ်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်ရွေးချယ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့် toning, masking နှင့် essence စသည့်အရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်အငြင်းပွားစရာမဖြစ်သင့်သောအဓိကခြေလှမ်းမှာနေရောင်ကာကွယ်...
2021-06-01 20:33:42 | ဘဝ
Linkedin ၏ FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ပြသခြင်းသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း Covid-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့်ယခုအချို့သောနေရာများတွင် "ပုံမှန်" သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေပါသည်။ ဤကြီးလေးသောကူးစက်ရောဂါ - သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိ...
နွေရာသီအတွက်လွယ်ကူသောတက်ကီလာကော့တေး ၈ ချက်
2021-05-25 19:48:45 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မှာမျှဝေပါ Twitter မှာမျှဝေပါ Linkedin တွင်လှန်ဖရဲသီးမာဂရီးတာကလှပသောရေစွန်အဖျားမှလောင်ကျွမ်းစေလိုသည့်နွေရာသီကိုလန်းဆန်းစေတဲ့တက်ကေးကော့တေးတစ်ခုလိုဘာမှမပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မာဂရီးတီ၊ Palomas နဲ့ Bloody Marias တစ်ယောက်တည်းမှာနေလို့မရဘူး။ (ငါကြိုးစားနေသလောက်) ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ငါ့အဖျော်ယမကာကစားခ...
2021-05-25 07:42:30 | ဘဝ
Linkedin Greater Zion, UtahJay Dash Photography Utah ၏ကျော်ကြားသောဇိအုန်အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ယခုနွေရာသီတွင်တစ်နေရာထက်ပိုပြီး ပို၍ ပူနွေးလာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူအုပ်စုငယ်များ၊ လိုင်းများမရှိ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနည်းပါးသောအတွေ့အကြုံများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လိုချင်သည်ဆိုပါကပန်းခြံသို့သွားရန်တစ်ရက်တည်းသာသွားပ...
ဆန်းသစ်သောဆန်းသစ်တီထွင်သူ sam fox မှပထမဆုံးသောဇိမ်ခံဟိုတယ်အယူအဆကိုအထူးသီးသန့်မြင်သည်
2021-05-25 05:09:35 | ဘဝ
ဂျိမ်းစ်မုတ်ဆိတ်ဆုကို ၁၁ ကြိမ်မြောက်ထူးချွန်သောစားသောက်ဆိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် Phoenix အခြေစိုက်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆမ်ဖော့စ်သည်သူ၏ပထမဆုံးအိမ်ခြံမြေဟိုတယ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဂလိုဘယ်သံအမတ်ကြီး။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Fox သည်၎င်း၏ကျော်ကြားသော Fox Restaurant သဘောတရား...